शिवराज योगी शुक्रवार, भदौ २३, २०७४ 1192 पटक पढिएको
करिअर बनाएर घरबार जोड्नेको संख्या अधिक हुन्छ समाजमा । तर घरबार जोडेर करिअरको पछि लाग्ने थोरैमध्येमा पर्छिन्, मीरा कार्की । काठमाडौंको धर्मस्थली- ५ पैयाटारमा जन्मिएर कलिलै उमेरमा विवाह गरेकी मीराको एउटा सपना दमित बन्यो । स्कुल पढ्दापढ्दै विष्णु कार्कीसँग गाँसिएको प्रेम सफल पार्न उनले हुनेखाने परिवार त्यागिन् । आमाबुवाको माया लत्याइन् । ‘कहाँ बस्ने ? के खाने ? ठाउँ ठेगाना केही थिएन', मीराले भनिन्, ‘नभागौं भने गाँसेको प्रेम तोडिने डर थियो । घरमा विवाहको कुरा चलिसकेको थियो ।'
२०५२ सालमा ९ कक्षा पढ्दापढ्दै विष्णुसँग प्रेमविवाह गरेपछि उनको संघर्ष सुरुभयो । श्रीमान् विष्णुले होटेलदेखि ट्राभल एजेन्सीसम्ममा काम गरे । २०५६ मा पहिलो सन्तान आशिष जन्मिए । २०६० मा छोरी आयुषा । त्यसैताका श्रीमान् विष्णुले आफ्नै ट्राभल एजेन्सीमात्रै खोलेनन्, घर, गाडीसमेत जोडे ।
छोराछोरी हुर्कंदै गएपछि मीराको दमित चाहनाले पिरोल्दै गयो । मीरा कहिले पढाउन पुगिन् त कहिले श्रीमान्कै अफिसमा कामका लागि दबाब दिन थालिन् । छोरा ९ कक्षा पढ्दै गर्दा मीराले उनलाई ऐच्छिक विषय ‘म्युजिक' लिन सुझाव दिइन् । ‘ श्रीमतीको यो कुराले मलाई रातभर निद्रा परेन', विष्णुले भने, ‘मैले किन त्यस्तो सुझाव दिएको ? भन्दा उनी झर्किइन्, मेरो चाहना त पूरा भएन, भएन, त्यो रहर अब छोरामार्फत पूरा भएको हेर्न चाहन्छु भनिन् ।' त्यसको भोलिपल्टै विष्णुले मीरालाई संगीत कक्षा भर्ना गरिदिए । अहिले उनी संगीत सिकीरहेकी छन् ।
यसबीचमा मीराले सातवटा गीतमा स्वर दिइसकिन् । गीत रचनामा पनि उनी अब्बल छन् । आफ्ना, श्रीमान् र केही अरूका शब्दमा स्वर भरेर मीराले ‘बहार' एल्बम सार्वजनिक गरिन् । मीरा र प्रमोद खरेलले स्वर दिएको गीत ‘शिरशिर शिरशिर बतास' बोलको गीतको म्युजिक भिडियो निकै रुचाइएको छ । उनले नयाँ एल्बमका लागी दुई गीत समेत रेकर्ड गरिसकेकी छन् । ‘यो मेरो यात्राको सुरुवातमात्रै हो', मीराले भनिन्, ‘मेरो यात्राको लक्ष्य भनेको कालजयी गीत नै हो ।'
बालबच्चा हुर्किसकेपछि सुरुभएको सांगीतिक यात्रामा उनी तनमन दिएर लागेकी छन् । ‘संगीतकर्म ढिलो सुरुभयो, त्यसबेला सुरु गर्न सम्भव थिएन', उनले भनिन्, ‘अब बाँकी जीवन यसैमा खर्चेर स्थापित गायिका बन्ने लक्ष्य लिएकी छु ।'
मीराको यात्रामा विष्णुको साथ छ । उनले भने, ‘धन सम्पत्ति बाँच्नका लागि रहेछ, उनको चाहना संगीत रहेछ । यो यात्रा थालेपछि उनको अनुहारमा अर्कै खुसी देख्छु । यो यात्रामा मैले भ्याएसम्म साथ दिन्छु ।'
नेपाल सांगीतिक संघ तथा सांस्कृतिक संस्थानमार्फत उनी उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनबाट सम्मानित भइसकेकी छन् । त्यस्तै म्युजिक खबर डट कमले सर्वोत्कृष्ट नवप्रतिभा महिला सुगम संगीत अवार्ड प्रदान गरेको छ । मीरा भन्छिन्, ‘यस्तो कालजयी गीत गाउन चाहन्छु, जसले मलाई नेपालीको हृदयमा सधैं राख्न सकोस् ।'
शुक्रवार, फागुन ४, २०७४ जय शम्भो
शुक्रवार, फागुन ४, २०७४ क्याफेमा चित्रकला
शुक्रवार, फागुन ४, २०७४ जिन ज्याक्स अनाउडका ५ सिनेमा
शुक्रवार, फागुन ४, २०७४ संगीतका 'नयाँ साथी'
शुक्रवार, फागुन ४, २०७४ जसले बिहेअघि नै सन्तान जन्माए
शुक्रवार, फागुन ४, २०७४ बाइक एन्ड ब्युटी
शुक्रवार, माघ २६, २०७४ ग्लुमी सन्डेको कथा
शुक्रवार, माघ २६, २०७४ खै डेटिङ स्पट ?
लालबाबुको दोस्रो अवतार 2440
बालुवाटारबाट 'झुल्किए' नवराज सिलवाल 3553
ट्रयाक्टर दुर्घटनामा दुईको मृत्यु, नौ घाइते 182
कालो बोको ढालेर सरकारी निवासमा मुख्यमन्त्री (फोटो फिचर) 3762
सीसी क्यामेरा प्रयोगबिहिन,बढ्यो सुरक्षा चुनौती 339